Ukushaywa wumoya okunoshukela Nendawo Yokubhukuda Yangaphakathi kanye Nokubukwa Kwe-Panoramic - I-Airbnb
Ukushaywa wumoya okunoshukela Nendawo Yokubhukuda Yangaphakathi kanye Nokubukwa Kwe-Panoramic
Kusanda kulungiswa!! Izithombe Ezibuyekeziwe Ezizayo Maduzane!! Indawo yokuphumula ekahle kakhulu e-Berkshires enokubukwa okukhulu, okuvulekile kwe-panoramic. Nge-4 br, 4.5 ba, ikhishi elisha elihle, indawo yomlilo yegesi & indawo yokubhukuda yangaphakathi, leli khaya liyindawo ekahle kakhulu yokuphumula nomndeni noma abangane! Kuningi okungenziwa e-Berkshires & leli khaya litholakala emizuzwini engu-12 kuphela ukuya e-Tanglewood, e-Shakespeare & Co, e-Berkshire Botanical Gardens, e-Mount, e-Norman Rockwell Museum. Izithombe ezintsha ezizayo ngo-May; ukubhukha kuqala ngo-June 1!!
Le ndlu iye yalungiswa ngokuphelele kulo nyaka, ngakho-ke ngena kuleli khaya elihle manje futhi uthathe ukubukwa kwesigidi sedola! Ukulungiswa kuhlanganisa ukulungiswa kabusha kwekhishi okuvulekela endaweni yokudlela nokuphumula, indawo ephansi entsha, izindlu zokugezela ezibuyekeziwe namakamelo okulala.
Ikamelo eliyinhloko lesibili lifakwe esitezi sesibili futhi ikamelo elakhelwe ngaphansi liye lathuthukiswa ukuze lihlanganise ikamelo lomndeni, indawo yokulala enombhede ogcwele futhi idonse i-twin trundle negumbi lokugezela eligcwele. I-patio enhle nomgodi womlilo kufakiwe kanye nokulungiswa okuphelele kwengaphandle lendlu. Sicela usithinte ukuze uthole imininingwane eyengeziwe, singathanda ukuthi uhlale nathi!
Ngenkathi uhlala emahlathini, uzizwa sengathi use-oasis yakho yangasese, kodwa ukuthenga kwasendaweni, imidlalo yaseshashalazini nezindawo zokudlela ezimangalisayo kuqhele ngemizuzu nje embalwa.